Akusiyo imfihlo ukuthi esinye sezifo kuvame kakhulu kwabesilisa kuthathwa prostatitis. Kodwa ukuze lesi sifo akusho ithuthuke futhi ukuqhubeka yokugwema imiphumela emibi, efana adenoma noma ukungazali, udinga ukwelashwa izoqaliswa ngesikhathi. Futhi ukuze basize kule kungenziwa kuphela sithuthukise olwenziwa ukuhlola umzimba. Futhi njengoba intuthuko ayikho indawo, bese esikhundleni ultrasound cwaningo abavamile livela entsha - TRUS (transrectal luhlolo we endlaleni engasesinyeni).
Ukuze siqonde ukuthi ziyini lolucwaningo, siqale nge umsuka imvelaphi yakhe siqu, okungukuthi ultrasound. Ultrasound, noma njengoba ibizwa, sonography, edonsa emizimbeni isithombe akhiwe ngaphakathi emzimbeni, esebenzisa ephezulu imvamisa wave ultrasonic. Isici yalolu cwaningo wukuthi kuba ngokuphelele emisebeni lingekho. Kufanele kukhunjulwe ukuthi, njengoba ucwaningo senzeka ngesikhathi sangempela, ke okuhambisa umshini hhayi kuphela umzimba isakhiwo, kodwa futhi kubonisa ukuhamba kwegazi ukuthi sidlula imithambo yegazi. Ngakho-ke, sicabangisisa ngazo zonke ngenhla, singaphetha ngokuthi TRUS, kuba luhlolo ngokuphelele non-koda yezokwelapha esiza ukucacisa imbangela isifo, isimo endlaleni engasesinyeni, futhi, kanye ezibekiwe ukwelashwa okufanele.
Kuze kube manje, lolu hlobo inhlolovo ingenye amazinga ayisisekelo ultrasound we endlaleni engasesinyeni. umehluko yayo kusuka ultrasound ejwayelekile ukuthi uphenyo kuyoba eduze ngangokunokwenzeka ukuze kakhulu emzimbeni ukuthi uzothola ulwazi olucacile kakhulu futhi kunembile.
Ukuphendula lo mbuzo: "Survey TRUS - kuyini," ungakwazi bulethe izinzuzo eziningana. Lezi zihlanganisa:
ukutholakala kwayo okusezingeni eliphezulu nokutholakala idatha.
Ezokuphepha, njengoba kulolu cwaningo siqedwa ngokuphelele ukusetshenziswa ionizing emisebeni.
Ukungabikho pheze ephelele contraindications nemiphumela engemihle, ingasetshenziswa nenombolo enganqunyelwe izikhathi.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo kungenzeka ukwenza biopsy, okungukuthi ukuze athathe isampula elincane lamaseli ukuqhuba izifundo.
ultrasound Transrectal we endlaleni engasesinyeni ngenxa ngokucacile yayo lungasetshenziswa in iziguli ngokweqile amafutha ezifakwa kule ndawo besisu, njengoba ucwaningo phakathi transabdominal (ngokusebenzisa le ndawo esiswini) sizoba nezinkinga ezithile ezihambisana ukudlula isignali ngokusebenzisa izicubu okunamafutha.
Kukhona kungenye yezinkomba engicasula kakhulu TRUS zihlanganisa:
Icacisa khona pathologies kungenzeka.
Ukunqunywa umdlavuza wendlala yabesilisa, okuyinto ingenye izakhi ezibalulekile uya khona nokwelapha okusebenzayo zemithi.
Ekufezeni imisebenzi zokuxilonga ezihlobene ukuhlonza neziqu normal ngaphakathi wendlala.
Yiziphi izimpawu kungaba imbangela lolucwaningo?
TRUS wendlala futhi isetshenziswa ngesikhathi esifanayo ne zimpawu ezilandelayo:
Okucatshangwa ukuthi banalo umdlavuza wendlala.
amazinga PSA ephakeme.
umuzwa njalo ekugcwaleni lwesinye.
semfene sína ukuhlolwa kwegazi kanye nomchamo.
A ezihlukahlukene ubuhlungu esifundeni isizalo.
Ukukhomba seal wendlala itholwe ngenkathi palpation yayo.
TRUS luhlolo: ukulungiselela kanye nezeluleko
Njengoba umkhuba ubonisa, ukuze uthole ulwazi olunembile kunazo etholwe lolucwaningo, kuzomele uqale ukulungiselela isiguli. Okokuqala kufanele ayifakiwe yakho ukudla Ukudla ezingaba babangela kumiswa igesi anda. Lezi zihlanganisa ubhontshisi, uphizi, iklabishi, ukubhaka imvubelo noma pasta. Ngaphezu kwalokho, kufanele kwenzeke ukuba kukhawulwe reception izithelo fresh (amagilebhisi, plums, apula eliluhlaza), kanye iziphuzo carbonated kakhulu kanye notshwala. I belungiselela wendlala transrectal kwaba ngokugcwele, udinga ukufaka e zabo imenyu inkukhu inyama abilisiwe, inhlanzi, imifino kuphekwe, isobho kanye iphalishi ketshezi.
Kubaluleke ngokukhethekile ukuba yokwamukela sakusihlwa awuzange umhla 18. Ngaphezu kwalokho, ngemva isikhathi esiyihora nengxenye noma qeda carbon isebenze kumele kuthathwe, kubalwa inani esekelwe 1 ithebhu. 10 kg isisindo. Uma wayefisa, esikhundleni ocushiwe carbon sorbents zisebenzisa namandla (izidakamizwa "Polyphepanum", "Polysorb") ukuthi kumele kuthathwe ngokuqinile ngokulandela imiyalelo.
Ngaphezu kwalokho, TRUS ukulungiselela siqukethe ekufezeni a enema ukuhlanzwa. Libuye esiphawuleka ngokukhethekile ukuthi ekuseni akuvunyelwe nhlobo sokudla sips ambalwa amanzi kuvumelekile. Zilungiselele yokuthi udokotela angase akucele ukuba alethe nawe luhlolo kwekhondomu, okuyinto ukuthenga okungcono transrectal ultrasound.
Njengoba umkhuba ubonisa, iningi amadoda kudingeka ukuqeqeshwa okukhethekile psycho-ngokomzwelo. Phela, ngokwesayensi kungase kutholakale, ukuthi noma imizwa ngokomzwelo, ezifana ukwesaba, kungabangela ubuhlungu obukhulu phakathi kuqoqwe. Ngakho-ke, uma ungakwazi sizakhele ngendlela yendabuko, ungathatha omnene anti-ukukhathazeka izidakamizwa. Njengoba isibonelo kungaba esebenzisa "Persian" noma "Novopassit".
Kanjani idivayisi sokufeza TRUS
Ukuze siyiqonde kangcono indlela ukwenza TRUS, cabangela indlela okubukeka ngayo kudivayisi. Scanner ngokwayo kufaka console, okuhlanganisa i-computer, i-computer, futhi inzwa ngokwayo ukuthi isetshenziselwa ukuhlola kwezitho zangaphakathi futhi imithambo yegazi. Futhi omunye yezingxenye ezibaluleke kakhulu le divayisi Lidlulisela, ukuthumela amagagasi umsindo imvamisa eliphezulu emzimbeni nokwamukela ngibabone. Ultrasound isithombe kungabonwa esikrinini, etholakala eduze futhi ukubukeka sifana-TV.
kuyinto inhlolovo kanjani?
Njengomthetho, TRUS - luhlolo, ozobakhona akukho imizuzu engaphezu kuka 15-20. Luqala ngokunikela yokuthi isiguli ucele oyakulala ngazo ngohlangothi lwakho ngakwesokunxele, ukudonsa amadolo akho esifubeni sakho bese uzama ukuzenza akhululeke. Ngemva kwalokho, lo dokotela ubeka ube ufake ikhondomu uphenyo transrectal futhi athambisa gel yakhe. Ngaphezu kwalokho, uSathane wasungula kakhulu ngokucophelela singene emanzini ingemuva. Ukujula esiphezulu kungenzeka afika kwangu-7 cm, kodwa ngokuvamile isiguli lingekho ngokuphelele ezinye noma ubuhlungu.
Phakathi TRUS wendlala inzwa ngokusebenzisa udonga le ingemuva ithunyelwa izimpawu ezikhethekile nge okwalandela okuhambisanayo ukuskena izithombe. Ukukhathazeka okufanele shayela amasignali ebonisa ukuthi wendlala ukhamisile ngobukhulu, it has a isakhiwo heterogeneous nokugcwala lemithambo noma ngemithambo. Zonke ezicashile ezithwetshulwe protocol cwaningo nokudluliswa obengeziwe udokotela ukuba khona.
Ngemva Zendlala Yesinye TRUS kuphelile, onguchwepheshe benza ucwaningo we vesicles kwesidoda. Ngokuvamile, kumele abe isakhiwo iyunifomu echogenicity bona (okuthiwa umthamo kwezicubu kubonise imisindo). Ngaphezu kwalokho, ukwesaba kungabangela Bubbles kanye ukunwetshwa mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi, kodwa ziyenzeka kungabonakala nasemkhakheni esimweni bashabalala eside. Ngakho-ke, isiguli kumele acinisekise nobe ekuphikiseni leli phuzu.
Yini engase ibe uzizwa phakathi naleyo nqubo?
Njengoba umkhuba ubonisa, zonke izivivinyo ultrasound ezisebenza endaweni evulekile yomzimba, cishe musa abangele yikuphi ukuphazamiseka. Ngakho-ke, uma kukhona akasidingi biopsy ke umuzwa ubambe TRUS uyofana indinganiso inqubo ultrasound. Uma kukhona isidingo biopsy, ukungakhululeki okuncane, kodwa iyakwazi zinyamalale ngokushesha.
Kwezinye izimo, TRUS contraindicated
Sesivele wathi okungukuthi ukuhlolisisa transrectal, ukuthi cwaningo cishe kobuhlungu. Kodwa ngisho lapha kukhona imikhawulo ethile yezingcingo akunakwenzeka ukuqhuba ngaphansi kwazo. Ngaphansi kwalesi sigaba iwe umuntu ingemuva akude, elibangela nobunzima ethile lapho umuntu eba ukuba kwenziwe uphenyo. Ngaphezu kwalokho, le nqubo is hhayi Kunconywa for iziguli hemorrhoids esigabeni oyingozi. Kodwa uma ucabangela ukuthi iphesenti amadoda nale nkinga lincane kakhulu, singasho ngokuphepha ukuthi azikho Izimo for TRUS alikho.
Mercury ubuthi: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Ukudoba nge ukuphotha Wabasaqalayo. amathiphu